Home Wararka Deni oo ku dhowaaqay go’aankiisa musharaxnimo ee xilka madaxweynaha
Deni oo ku dhowaaqay go’aankiisa musharaxnimo ee xilka madaxweynaha
Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa caawa si rasmi ah u shaaciyey inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Saciid Deni ayaa go’aankan uga dhowaaqay kulan uu caawa la yeeshay xildhibaanada cusub ee baarlamanka Soomaaliya ee laga soo doortay deegaanada Puntland, kuwaas oo madaxtooyada Garowe uu ku qaabilay.
Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani ayaa qoraal kooban oo uu baahiyey waxuu ku yiri, “Madaxweyne Deni wuxuu u taaganyahay xilka Madaxweynaha Soomaaliya, waa hoggaamiye samata bixin kara dalkeena. Soomaaliya waxay u baahantahay in dadku codeeyo iyo in nabad la helo labadaasina isaga ayaa ku suntan.”
Saciid Deni ayaa tan iyo markii ay billowdeen doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya, iyo kasii horba, waxaa aad loo hadal hayey inuu damac uga jiro xilka madaxweynaha Soomaaliya, taas oo ugu dambeyn uu caawa xaqiijiyey.
Xildhibaan Cawil Xasan Daad oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Puntland ayaa ku goodiyay in baarlamaanka uu xilka ka qaadi doono madaxweynaha maamulkaas Saciid Cabdullaahi Deni, haddii uu ku dhawaaqo inuu u sharaxan yahay xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Shaacinta go’aankaan waxay ku soo aaday, iyadoo maanta Xildhibaan Cawil Daad oo ka tirsan baarlamaanka Puntland uu ku goodiyey in haddii Saciid Deni uu ku dhawaaqo inuu murashax u yahay dowladda dhexe ay si toos ah baarlamaanka Puntland xilka ugu xayuubi doonaan.
Xildhibaanka ayaa Deni ku eedeeyay waxqabad la’aan seddax sano ah iyo dib u dhac ay wajaheyso Puntland, wuxuuna sheegay in dastuurka cusub ee Puntland uu cadeynayo in madaxweynaha Puntland uusan isku sharixi karin xil kale, isagoo jagada madaxweynaha Puntland haya oo aan iska casilin ama laga qaadin.
Madaxweyne Deni ayaa xildhibaanada uu caawa Garowe kula kulmay waxuu u soo bandhigay go’aankiisa musharaxnimada, isagoo ka codsaday inay ku taageeraan hanashada kursiga ugu sareeya dalka.
Previous articleXildhibaanno Somaliland oo la Rabay in Baydhabo lagu Xabiso oo Farmajo Runta u Sheegay
Next articleKaligii talis raba in uu bedelo Kaligii talis kale
Deg Deg: Aqriso liiska magacyadda dadka dhaawaca ah ee Isbitaalada...
Hargeysa oo lagu aasay Laliyihii Ciidanka Booliska Soomaaliland ee geeriyoday